वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिनुमा हाम्रै कमजोरी छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिनुमा हाम्रै कमजोरी छ
असार २३, २०७५ शनिबार १६:१८:१५ | उज्यालो सहकर्मी
मोहन दाहाल, दमक झापा, हाल आबुधावी/ युएई
म अहिले अल वासिता इमिरेट्समा अपरेशन म्यानेजरको रुपमा काम गरिरहेको छु । ८ वर्ष अघि म स्टोर किपरको रुपमा आएको थिएँ । ८ वर्षको बसाईंले परदेशका बारेमा धेरथोर बुझ्ने भएको छु ।
प्राय जसो हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीका आउनेहरुलाई कतै दलालले, कतै एजेण्टले त कतै म्यानपावरले ठगे भन्ने खबर आइरहन्छ । अनि यो सरकारले गर्दा भएको भन्ने कुरा पनि सँगै आउँछ । तर मलाई चाहिँ यस्ता खबर सुन्दा यसमा हामी अर्थात वैदेशिक रोजगारीमा आउने व्यक्तिको पनि कमजोरी छ जस्तो लाग्छ ।
ठगी रोक्न जनचेतना बढाउनुपर्यो भन्छौं । तर साँच्चै चेतना नभएकैले ठगिएका हौं कि बुझ्दा बुझ्दै र जान्दा जान्दै आफ्नै कारणले ठगिएका हौं एक पटक सोचौं त ।
सरकारले विदेश जाने बेलामा एजेण्ट, दलाल र म्यानपावरलाई १० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै पैसा नदिनु भनेको छ । तर हामी म्यानपावरले दिने आश्वासनमा परेर एक लाख, दुई लाख रुपैयाँ दिन्छौं अनि रसिद चाहिँ दश हजारकै समाउँछौं अनि यसमा सरकारले के गरोस् ।
पछि हामीलाई समस्या पर्दा यही प्रमाणकै आधारमा त हो सरकारले न्याय दिने अनि त्यतिबेला जम्मा दश हजारकै कुरा आइहाल्छ । सरकारले जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि हामी त्यसको पालना गर्दैनौं भने हाम्रै कमजोरी भएन र ?
यदी एक जनाले म्यानपावरले भनेको गलत कुरालाई राम्रोसँग हेरेर म यसमा जान्न, यस्तो काम गर्दिन भन्न सक्ने हो भने आजको एक जना भोलि हजारौं हुन्छ ।
हामीलाई विदेश पुग्ने मात्रै हतारो हुन्छ । सम्झौता पत्र राम्रोसँग हेर्दैनौं । म्यानपावरले यहाँ साइन गर्नुस् त भन्ने बित्तिकै साइन गर्छौं । यदी हामीले राम्रो शिक्षा पाएका थियौं भने काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले गरिने सम्झौता पत्र भनेको खेलाची होइन यसलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँथ्यौं । तर हामी त्यसो गर्दैनौं ।
कसै कसैले तलब कति हो भनेर हेर्न खोज्दा म्यानपावरका प्रतिनिधिले त्यहाँ नहर्नु न पहिला हस्ताक्षर गर्नु भनेपछि जान नदिने पो हो भन्ने सोचेर हतारमा हस्ताक्षर गर्छौं । तर तपाईंले सम्झौता पत्र राम्रोसँग हेर्दैमा र त्यसका बारेमा स्पष्ट हुन खोज्न विदेश जान नपाउने वा नदिने भन्ने हुँदै हुँदैन ।
त्यो त तपाईंको अधिकार हो । यदी तपाईं आफ्नो अधिकार लिने कुरामै चुक्नुभयो भने पछि समस्यामा परियो भने तपाईंका लागि कसले लडिदिन्छ । हामी सरकार सरकार मात्रै भन्छौं । तर सरकारलाई हामीले नै यथार्थ कुरा लुकाइरहेका छौं ।
अहिलेको जमानामा सबै कुरा मोबाइलमा, नेटमा हेर्न पाइन्छ तर हामी हेर्दैनौं अनि म्यानपावरले जे भन्छ त्यही मानेर धेरै तलबमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र एयरपोर्टमै च्यातेर जम्मा ४ सय दिर्हाम लेखिएको सम्झौता पत्र चाहिँ बोकेर आउँछौं । अनि सरकारले गर्दिएन भन्छौं । यो जायज हो र ? त्यसैले आफैं सचेत हुनुपर्छ ।
यस्तै अवस्थामा विदेश आइयो भने यहाँ आइसकेपछि सोचेको जस्तो विदेश पाइँदैन । त्यसले तनाव हुन थाल्छ । त्यसैले आउनुभन्दा अगाडि नै सचेत हुनुपर्छ । हामी आफैं जिम्मेवार बन्यौं भने समस्यामा पर्नबाट जोगिन सकिन्छ ।
July 9, 2018, 9:53 p.m.
सहि कुरा हो मोहन सरको
July 8, 2018, 7:28 a.m.
सहि कुरा हो सर हो यसरी नाइ प्रतिकृया जान्कारि दिदाइ आउनुहोस अलिकती हामी लगाएत सम्पुर्ण दाजु भाइ दिदी बहिनी मा बुझ्न सक्ने मनोस्थिती को मौका मिल्न सक्छ सर धन्यबाद सर
July 7, 2018, 4:42 p.m.
tapai ko sujab ramro lago but dalal lai paisa na khui kan bidesa jan painna k garni ta sir
July 7, 2018, 4:41 p.m.
जहाँ राँकाे बालेर छिमेकीलाई गाली गर्दै साउने सक्रान्ति मनाइन्छ
दिगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ...
चितवनमा एक वर्षमै ४३ गैँडासहित ७७ ओटा वन्यजन्तु मरे
धनकुटाको साँगुरीगढीमा विस्फोटक पदार्थ फेला
युरोप पठाइदिन्छु भन्दै ५१ लाख बढी ठगी गर्ने एकजना पक्राउ
६ महिनामा भित्रिए झण्डै ६ लाख पर्यटक, पोहोरभन्दा १२ दशमलव ६ प्...
६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई मात्रै पेन्सनको व्यवस्था गर्न का...
बिल गेट्सलाई उछिन्दै बर्नार्ड अर्नल्ट पुगे अर्बपति सूचीको दोस्रो ...
लागुऔषध प्रयोगकर्ताबाट ‘पेनगन’ बरामद
मुम्बई आक्रमणका 'मास्टरमाइन्ड' हाफिज सईद पाकिस्तानकाे लाहाेरबा...